Taliyaha Booliska Oo Ka Hadlay Heegan La Geliyay Ciidamadda | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Taliyaha Booliska Oo Ka Hadlay Heegan La Geliyay Ciidamadda
Hargaysa (SDWO): Ciidamadda booliska Somaliland ayaa heegan buuxa la geliyay guud ahaanba goboladda dalkoo dhan, kaasi oo lagu tilmaamay mid loogu diyaar garoobayo hawl gall oculus oo ay ciidanku bilaabayaan.
Taliyaha ciidamadda booliska Somaliland sareeye guuto C/laahi Fadal Iimaan, oo ay wehelinayeen taliye ku-xigeenka iyo dhamaanba saraakiisha kala duwan ee ciidamadda booliska, ayaa saaka xarunta taliska guud ee booliska magaaladda Hargaysa waxay ku soo bandhigeen dhoolatus ay ku tilmaameen in loogu diyaar garoobayo hawlaha ay ciidanku fulin doonaan.
Sareeye guuto C/laahi Fadal Iimaan, oo warbaahinta kula hadlay xarunta taliska booliska ayaa faahfaahin ka bixiyay u jeedadda heeganka loo geliyay ciidamadda ayaa sheegay in maadaama oo dalku dhawaan gelayo doorashooyin in boolisku ay gelayaan heegan culus oo lagaga hor tegayo wax kastoo khal-khal ku keeni kara nabadgeliyadda.
Waxaanu xusay in aan loo dul qaadan doonin cid kastoo isku dayda in waxyeelayso amniga, isla markaana tallaabo adag oo sharci ah laga qaadi doono cidii falal nabadgeliyadda lidi ku ah samaysa. “Waajibaadka aanu halkan isugu nimid sidii caadadda noo ahayd waxay tahay, adkaynta nabadgeliyadda maadaama ay inagu soo fool leeyihiin doorashooyinkii. Ciidamanka bilaysku wuxuu u dabran yahay oo uu qaranka Somaliland u xil saaran yahay, ilaalinta amniga qaranka Somaliland iyo bulshadda reer Somaliland”ayuu yidhi taliye Fadal.
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi “Waxaanu u sheegaynaa cid kastoo isku dayda nabadgeliyadda qaranka jamhuuriyadda Somaliland in ay wax yeelayso ama dhibaatayso in ciidamadda booliska, oo kaashanaya qaybaha kale ee ciidamadda qalabka sida ee jamhuuriyadda Somaliland in ay ka qaadi doonaan tallaabo adag oo sharciga waafaqsan.
Cidna ciidanku xad-gudub ku samayn maayo, laakiin cid kastoo isku dayda in ay nabadgeliyadda wax u dhinto, waxaan u sheegayaa in laga qaadi doono tallaabo adag oo sharci ah. cid walba sharciga ayaa ka sareeyo, nin waliba ha ogaado in sharcigu ka sareeyo”.
Sidoo kale taliyaha booliska ayaa fariin u diray shacabka Somaliland oo uu ugu baaqay in ay ciidamadda la shaqeeyaan, wixii ay ka shakiyaana la soo socod siiyaan ciidamadda bilayska. Waxaanu yidhi “Waxaan halkan amaan uga jeedinayaa bulshadda reer Somaliland ee aad iyo aad-ka u wanaagsan.
Waxaanan u dirayaa fariin ah in sidii wanaagsanayd ee ay awalba ciidamadda ula shaqayn jireen ay ula shaqeeyaan. Waxa kale oo aan farayaa bulshadda in wax kastoo uu dareen ka gallo in ay ciidamadda bilayska soo gaadhsiiyaan”.
“Dhamaanba haddii ay tahay dhalinyaradda kooxaha ah ee rebshadaha ka samaysa magaalooyinka, haddii ay tahay Tuugta iyo cid kastoo nabadgeliyadda wax u dhimaysa, ciidanka booliska waa waajibaadkoodda qaranku u xil saaray in ay wax ka qabtaan.
Waxaan uga digayaa cid kastoo isku dayda in ay amniga qaranka wax yeesho, in ciidanka boolisku tallaabo adag ka qaadi doonaan”.
Ugu danbayn taliye Fadal, waxa uu furay dhamaanba taliye qaybeedyadda goboladda dalka in ay amarkaasi sidii hore-ba loogu wargeliyay in ay fuliyaan, isla markaana u diyaar garoobaan hawlaha dalka ku soo foolka leh. “Waxaan ku cel-celinayaa, ciidamadda booliska ka bilaw taliye ku-xigeenka koowaad, taliye ku-xigeenka labaad, dhamaan hogaamadda iyo ciidan weynahaba, anigoo amaan u jeedinaya kuna tilmaami kara naftood hure-yaal, qarankooda iyo bulshadoodda diyaar u ah in ay u diyaar garoobaan, una dhabar adaygaan, hawlaha adag ee inagu soo foolka leh.
Dhamaanba taliyeyaasha qaybaha ee goboladda dalka, waxaan farayaa in amarkani uu khuseeyo, oo la diyaar garoobo, idinkoo hore-na secular idiinku yimid, in Nin waliba uu guntiga Dhiisha isaga dhigo. Shacabka gobolada-na waxaan ka codsanayaa in ay ciidamadda bilayska gacan siiyaan” ayuu yidhi taliyaha ciidanka booliska Somaliland.